"Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho; fa Ianao no amiko."Salamo 23:4
Raha nanoratra ny Salamo 23 i Davida, dia niombona tanteraka tamin’Ilay Andriamaniny. Tam-pankasitrahana no nanambarany hoe: “Ianao no amiko”, na dia voatery handeha eo amin’ny “lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho”.
Fony tanora i Davida dia nandalo fotoan-tsarotra. Nitady hamono azy i Saoly rafozandahiny, satria natahotra sao i Davida no hiakatra eo amin’ny sezafiandrianana, haka ny toeran’i Jonatana zanany. Fa Andriamanitra kosa niahy an’i Davida. Tamin’ny nandositra an’i Saoly sy ny miaramilany izy no nanoratra salamo maro, nanehoany ny fahatokiany an’Andriamanitra. Mbola mampahery ny finoantsika hatrany ireny tononkalo ireny, ankehitriny.
Toy izany koa, hoy Andriamanitra tamin’ny mpaminany Jeremia: “Momba anao … Aho” (Jeremia 30:11). Nampiany izy nandritra ny androm-piainany. Nanafaka azy tamina toe-javatra mampivarahontsana Izy, indrindra raha nisy olona to teny teo amin’ny fiarahamonina, nitady hamono azy, satria izy nasain’Andriamanitra nanambara fa ho azon’ny fahavalo i Jerosalema.
Nampahery an’i Jeremia Andriamanitra: “Hataoko manda varahina mirova ho amin’ity firenena ity ianao : Hiady aminao izy, nefa tsy hahaleo anao; fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao Aho” (Jeremia 15:20).
Fantatr’i Jeremia fa tsy afaka niantehitra taman’olona izy. Niankina tamin’Ilay Andriamaniny izy, ary nahita ny famonjeny, na dia nogadraina tsy ara-drariny aza, satria vavolombelona tsy mivadika. Nomba azy Andriamanitra.
Isika ihany koa ve, mba afaka miteny hoe: «Momba ahy Ianao.»?